Fampidirana lahatsoratra mikasika ny mpanoratra - Tononkalo Malagasy - Serasera.org
You are here: home > Torolalana momba ny ... > Fampidirana lahatsor...
Fampidirana lahatsoratra mikasika ny mpanoratra
Hamoaka sy hampahalala ny mpanoratra sy ny tononkalo malagasy rehetra no tanjona. Ka dia mangataka aminao izahay, ny hanaovanao lahatsoratra fohy izay avoaka eo amin’ny pejy fandraisana vetso.tononkalo vaovao. Mba hahamora ny fanoratanao izay lahatsoratra izany dia indro misy drafitra azonao arahina.
1 ) Mombamomba anao (biographie) : solon’anarana hahalalana anao / anaranao / toerana honenana / asa atao / imailaka azo hifanoratana / sary (. jpg) avoaka miaraka amin’ny lahatsoratra / adiresin’ny tranokala na bilaogy / mpikambana ao anaty fikambanan’ny mpanoratra ve ianao ( Havatsa. Sandratra... )
2 ) Oviana no nanomboka nanoratra voalohany / inona ilay tononkalo / firy ny tononkalo nosoratanao hatramin’izay.
3 ) Iza ny mpanoratra tianao indrindra ary inona ny tononkalo nosoratany ankafizinao
4 ) Efa namoaka boky na rakitra hafa hitahirizana sy hamoahana ny sangan’asa ve / raha tsy mbola dia rahoviana / misy sangan’asanao ampiasain’ny mpanatalenta hafa ve ( ohatra hoe navadika tononkira )
5 ) Inona avy ny hetsika efa nandraisanao anjara hampahalalana ny sangan’asanao . ( ohatra hoe tononkalo mariazy, na fety samihafa … )
6 ) Inona ny hetsika mety handraisanao anjara manaraka / antsan-tononkalo , na seho hafa .
7 ) Inona no hafatra tianao hampitaina ho an’ny mpamaky ny tononkalo vetso
8 ) Apetraho eo ambany ny tononkalo nosoratanao tianao indrindra
Ireo teboka valo ireo dia soso-kevitra fotsiny ary tsy fanontaniana akory fa drafitra hahamora ny fanoratana ilay lahatsoratra mombamomba anao. Ary TSY VOATERY ARAHINA ARA-BAKITENY na VALIANA daholo, fa malalaka ianao manoratra izay tianao.
Mba hahamora ny fanatanterahina izany dia tsara raha misy sarinao mipoitra eo amin’ilay pejy. Satrinay tokoa mba hitovy ny sarinao miseho amin’ny pejy fandraisana sy ny “sarintava” ao amin’ny serasera mba tsy hahavery ny mpamaky.
Kendreo mba tsy ho lava loatra ny lahatsoratra manjary mahamonamonaina ny mpamaky. Raha fantatrao fa lava loatra ny lahatsoratra nosoratanao dia andefaso sary ( . jpg ) maromaro izahay hanaingona azy.
Rehefa vita izany dia azonao alefa amin’ny haja@serasera.org ilay lahatsoratra